Soomaalida iyo Doorashooyinka Britain.
Doorashooyinka guud ee bisha May 6-deeda ka dhici doona Britain ayaa waxaa ka qeybgalaya ilaa 14 musharax oo ka soo jeeda Soomaalida Britain
Doorashooyinkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay korodhay tirada Soomaalida Britain degna, waxaana haatana lagu qiyaasaa ilaa dhawr boqol oo kun oo qof, kuwaasoo inta badan haysta dhalashada dalkan Britain. Soomaalidan waxay xaq u leh in ay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka guud.
Waxaa Sidoo kale jira ilaa dhawr iyo toban murashax oo ka mid ah Soomaalida Britain, kuwaasoo xisbiyada kala duwan ee siyaasadda uga qayb galaya doorashooyinka dawladdaha hoose, iyada oo murashaxiinta Soomaalida ah badankoodu ay iska soo taagayaan magaalada London.
Sadexda Xisbi ee ugu waaweyn Britain ee Shaqaalaha (Labour-ka), Muxaafidka iyo Lib-Demka ayaa waxaa musharixiintooda ka mid ah Soomaalida Britain. Xisbiga talada haya ee Labour-ka waxaa degmada Brent ee dhinaca waqooyi ee London iska soo sharaxay Xarbi Cilmi Faarax. Xisbiga Muxaafadkana waxaa degmada West Minister iska soo sharaxay Abuukar Cawaale, halka xisbiga Lib-Dem uu degmada Camden iska soo sharaxay Cabdiweli Maxamuud Sheekh Xasan.
Sidoo kale xisbiga uu aas-aasay George Galloway ee lagu magacaabo RESPECT waxaa musharixiintiisa ka mid ah nin ka tirsan Soomaalida Britain.
Warbixinta Doorashada Britain